Safal Khabar - एउटा अधकल्चो यात्रा
एउटा अधकल्चो यात्रा
बिहिबार, १९ मङि्सर २०७६, १६ : १९
– लाफ्टर बाबा
संसार दुःखको सागर हो । यहाँ केही प्राप्त भए पनि दुःख छ । प्राप्त नभए पनि दुःख छ । यो विज्ञानको युग हो । विज्ञानले अनेकौं भोगविलासका साधन निर्माण गरेका छन् । धेरै मानिसहरु सुखका लागि अन्धभक्त भएर विज्ञानको पछि लागेका छन् । जति धेरै भोगविलासको साधन मिल्छ उति नै आनन्द प्राप्त हुन्छ भन्दै त्यसका पछि लागेका छन् । अपसोच ! भोगविलासका साधनहरूले क्षणिक सुख दिए पनि अन्ततः मान्छे दुःखमै छन् । भोगविलासका कुनै पनि साधनहरूले मानिसको दुःख पूर्ण रूपमा टाल्न सकिरहेका देखिन्न । बरु मानिसहरुको दुःख दिन प्रतिदिन बढ्दो देखिन्छ । झट्ट हेर्दा बाहिरबाट सम्पन्नता बढेको देखिन्छ, तर भित्रभित्रै खोक्रिरहेका छन् उनीहरू । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो संसारको सबैभन्दा बढी आत्महत्या विकसित देशहरुमा नै हुनु ।
एकातिर भौतिकवादको अति छ । अर्कातिर अध्यात्मवादको अति । केही व्यक्तिहरु संसार भ्रम हो, मात्र परमात्मा सत्य हो भन्दै गुफाकन्दरामा साधना गर्दै आफैँमा मस्त छन् । उनीहरू बाहिरी संसारसँग केही पनि चासो राख्दैनन् । उनीहरु बाहिरबाट झट्ट हेर्दा भिखारीजस्ता देखिन्छन् । उनीहरुसँग भौतिक स्रोतसाधन केही पनि हुँदैन ।
दुवै अतिको बीचमा केहि व्यक्तिहरू अरूलाई अनेक भ्रम छर्दै भगवान् देखाउँछु, म भगवान्को दूत हुँ, सबैजना मैले भनेअनुसार चल्नुपर्छ, आफूलाई संसारको रक्षा गर्न भगवान् स्वयम्ले पठाएका हुन् भन्दै सोझासाझा मानिसलाई ठगिरहेका छन् । कोही जादुचटक देखाउँदै मानिसहरूलाई भ्रममा पार्दै आफू नै भगवान् हुँ भन्दै ठगिरहेका छन् । यी दुवै अतिवादबाट बाहिर निस्किएर भौतिक(बाहिरी) रुपमा सम्पन्न र भित्री रुपमा शान्त मानव निर्माण गर्न आवश्यक छ । जो भित्र शान्त र बाहिर सम्पन्न छ त्यो नै पूर्ण मानव हो । दुवै अतिको समुद्रमा फसेकाहरूलाई त्यसबाट पार गराउँदै पूर्णतातिर लाने राम्रो चालक हुँ म ।”
एकजना व्यक्ति मान्छेहरुको बीचमा देखा पर्छन् र मानिसहरूलाई मोहित पार्ने यस्तो प्रवचन प्रस्तुत गर्छन् । उनले सबै मानिसहरुका अगाडि घोषणा गर्छन् कि म सबै मानिसलाई दुःखबाट मुक्ति दिलाउनेछु । अब हजुरहरूका दुःखका दिन गए । म हजुरहरुलाई दुःखको सागरबाट पार गराउँदै परम् आनन्दको शिखरमा पु¥याउने छु । जो यस यात्रामा सहभागी हुन्छ, उसले भौतिक सफलता र आध्यात्मिक सफलता (आफूभित्रको परम् शान्ति) एकैसाथ प्राप्त गर्छ । जसरी भोकले कमजोर भएर बसेका बालकहरु आमाको आवाज सुनेपछि आवाजतर्फ लम्कन्छन् त्यसैगरी दुःखमा छट्पटिएका मानिसहरु उनीतर्फ लम्कन्छन् । उनले ती मानिसहरुलाई परम्शान्तिको बयान गर्छन् । निबुवामा नुनखुर्सानी मिलाएर साँधेको बयान सुन्दा जसरी हाम्रो मुख रसाउँछ त्यसैगरी शान्ति र आन्नदको बयान सुन्दा उनीहरुको रोमरोममा शक्तिको सञ्चार हुन्छ । उनीहरुले आफूले अहिलेसम्म गरेका उपलब्धीहरू व्यर्थै ठान्छन् । सारा कुराहरु छाडेर उनीहरु ती व्यक्तिसँगै यात्रा गर्ने निर्णय गर्छन् । यात्राका लागि ठूलो तयारी आवश्यक हुन्छ । चालक आफूले कमाएको सम्पत्तिको केही भाग जहाज बनाउनमा लगानी गर्ने मनसायका साथ भन्छन् – “यो बन्दै गरेको जहाज संसाररुपी सागरबाट मुक्ति दिलाउनका लागि हो । यो हामी सबैको साझा हो ।” उनले यसरी घोषणा गर्दै त्यो तयार गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको हो भन्छन् । सबै यात्री उत्साहित हुदै दिनरात भोकतिर्खा नभनी निर्माण कार्यमा जुट्छन् । चालक पनि हरतरहले यात्रा सफल बनाउने उद्देश्यका साथ निर्माण कार्यमा लागि पर्छन् । सबैको मिहेनतले जहाज तयार हुन्छ । यात्रीहरुमा खुसीको सीमा नै हुँदैन ।
चालकले परमानन्द र भौतिक सफलताको शिखरमा एकैसाथ पु¥याउने दिव्यजहाज चल्न सुरm भएको उद्घोष गर्छन् । सबैमा एकैसाथ हाँसो गुञ्जिन्छ । सबैजना आफूले कहिल्यै कल्पनासमेत नगरेको दिव्य आनन्द प्राप्त भएको अनुभूति गर्छन् । यात्रा अघि बढ्दै जाँदा समुद्रमा एक्कासि आँधी चल्न सुरm गर्छ । राम्रो अनुभव नभएका कारण त्यस आँधीमा जहाज सही तरिकाले अघि बढाउन सक्तैनन् चालकले । त्यस आँधीका कारण धेरै यात्रीहरु घाइते हुन्छन् । चालक यात्रीहरूलाई हौसला प्रदान गर्दै भन्छन् – “महान् उपलब्धीका लागि दुःख अनिवार्य कुरा हो । जति धेरै दुःख हुन्छ त्यति नै ठूलो उपलब्धी प्राप्त हुन्छ । जहाँ दुःख हुँदैन, त्यहाँ उपलब्धी हुँदैन (लय उबष्ल लय नबष्ल) । चालकको कुरा सुनिसकेपछि यात्रीहरूमा हौसला बढ्छ । उनीहरू आफ्नो दुःख बिर्सिएर महान् सुखको कल्पनामा मग्न हुन्छन् ।
समुद्रको ठाउँठाउँमा रहेका टापुहरुमा ठक्कर खाँदै बडो कष्टका साथ यात्रा अगाडि बढिरहेको हुन्छ । यात्रीहरू जस्तोसुकै दुःखका बाबजुत पनि आफूलाई महान् उपलब्धीतर्फ अघि बढिरहेको भाग्यमानी व्यक्ति ठानिरहेका हुन्छन् । फेरि पनि जहाज कतै गएर ठूलो सामुद्रिक जीवमा ठोक्किन पुग्छ । यात्रीहरुलाई धेरै चोट लाग्छ । अब यात्रीहरुमा शंसय (शङ्का) पैदा हुन्छ ।
यात्रीहरुबीच कुरा चल्छ – “के हामी बलिरहेको बत्तीप्रति मोहित भएर बत्तीको आकर्षणमा झुम्मिएका पुतलीहरु नष्ट भएझैं नष्ट हुने त होइनौँ ?”
यस्तो चर्चा यात्रीहरूमा चलिरहेको चालकले सुन्छन् । चालक यात्रीहरुलाई सम्झाउँदै भन्छन् – “माटोभित्र पस्ने आँट नगर्ने बीजहरुलाई चराचुरmङ्गीले खाएर समाप्त गरिदिन्छन् । माटोभित्र प्रवेश गर्न राजी भएका बीजहरूमा आफू समाप्त भइयो कि भन्ने भ्रम पैदा हुनु स्वभाविक कुरा हो । आफ्नो पुरानो स्वरुप नष्ट भएर नयाँ वृक्षका रुपमा प्रकट हुँदा उनीहरु आफ्नो धन्यता देखेर आफैँ चकित हुन्छन् । हजुरहरु पनि ठूलै उपलब्धीतर्फ अघि बढिरहनुभएको छ । हजुरहरुको चमत्कारपूर्ण दिन नजिकै छ । यात्रीहरू चालकको कुराप्रति विश्वस्त हुन्छन् । धेरै कष्टका बाबजुद आफूलाई सम्हाल्छन् । उनीहरूले जति दुःखकष्ट भोग्नुपर्छ उति नै उपलब्धी भएको ठान्छन् । ठूलै उपलब्धी भएको र आफू सत्यनजिक पुगेको गर्व गर्दै पीडा बिर्सिएर सबैमा हर्षोलास छाउँछ । यात्रा बडो रौनकताका साथ अघि बढिरहेको हुन्छ । जहाज अघि बढ्दै गर्दा फेरि ठूलो ढुङ्गामा ठोक्किन पुग्छ । यात्रीहरूमा चोटमाथि फेरि अर्को ठूलो चोट थपिन्छ ।
उनीहरु दुःखका कारण आफूलाई सम्हान सक्ने स्थितिमा छैनन् । “के हँुदैछ जिन्दगी ? भ्रम नै भ्रम छरेर चालकले हाम्रो जिन्दगी बर्बाद गर्दै त छैनन् ?” – यस्तै कुराहरु आपसमा चलिरहेका बेला चालक यात्रीहरुलाई सम्झाउँदै भन्छन् – “संसारको सबैभन्दा सस्तो वस्तुमध्येको पंक्तिमा पर्ने कोइला जब ताप र चापमा बस्छ त्यो नै संसारको सबैभन्दा मूल्यवान वस्तु हीरा भएर निस्कन्छ । ताप र चापमा नपरेका कोइलाहरू सधैं कोइला नै रहिरहन्छन् । त्यसकारण हजुुरहरु जति ताप र चापमा परिरहनुभएको छ त्यति नै मूल्यवान बन्दै हुनुहुन्छ ।”
यात्रीहमा खुसीको सीमा नै हुदैन । उनीहरुमा दुःखभन्दा पनि आफू संसारको महान् उपलब्धीको नजिक पुगेको भावना जाग्छ । सबै उपलब्धी प्राप्त भइसकेको अभिनय गर्दै हाँस्न थाल्छन् । हाँसो सर्वत्र गुञ्जिन्छ । वरिपरिबाट नियालिरहेका मानिसहरू पनि उनीहरुको खुसी देखेर मोहित भइरहेका हुन्छन् ।
यात्रा अगाडि बढ्दै जान्छ । चालक पनि आफ्नो सम्पूर्ण विवेक र शक्ति प्रयोग गर्दै उनीहरुलाई सही गन्तव्यमा पु¥याउने भावका साथ अघि बढेका हुन्छन् । यात्रा अनेक उतारचढावका साथ अघि बढिरहेको हुन्छ ।
चालकले सही बाटो ठम्याउन सक्तैनन् । उनले नचाहँदानचाहँदै जहाज ठूलो सामुद्रिक टापुमा ठोक्किन पुग्छ । जहाजका सबै यात्री घाइते हुन्छन् । चालक पनि आफूले कल्पनासमेत नगरेको दुर्घटना हुँदा विक्षिप्त हुन्छन् । चालक आफ्नो अहङ्कार (घमण्ड)का कारणले आफ्नो दोष स्वीकार गर्दैनन् । संस्कारहीन यात्री परेका र उनीहरु आफ्नो निर्देशनमा शान्तसँग नबसेर हल्लिएका कारण दुर्घटना भयो भनेर यात्रीहरूलाई दोष दिन्छन् । उनले घाइते छटपटाइरहेका यात्रीहरूलाई उपचार गर्नु त परै जाओस् सान्त्वनासमेत दिँदैनन् ।
यात्रीहरुलाई उनले भन्छन् – “मैले कसैलाई पनि बन्धनमा पारेर कमजोर बनाउन चाहन्नँ । हजुरहरु स्वतन्त्र जीवन ज्युन सक्नुहुन्छ ।”
यति सुनेपछि घाइते यात्रीहरु ठूलो छाँगाबाट झरेजस्ता हुन्छन् । उनीहरू एकैसाथ प्रश्न गर्छन् – “यात्राअघि हामीलाई कस्तो वचन दिनुभएको थियो ? अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ ?”
चालक आफ्ना यात्रीहरुलाई दिएको आश्वासन ढाकछोप गर्दै भन्छन् – “त्यो त केवल अनुसन्धानका (एक्पेरिमेन्ट)लागि पो भनेको थिएँ ।”
यस्तै बहाना गर्दै ती पीडाले छट्पटाएर चिच्याइरहेका यात्रीलाई उनले हतारहतार समुद्रको बीचमै अलपत्र छाडिदिन्छन् । समुद्रको बीचमा छाडिएका घाइते यात्रीहरु मर्नु या त आफूले सक्दो प्रयास गर्नुबाहेक दोस्रो विकल्प हुदैन । उनीहरू सुरक्षित ठाउँमा पुग्नका लागि आफ्नो पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्छन् । केही यात्रीहरुको अगाडि बढ्न खोज्दाखोज्दै डुबेर मृत्यु हुन्छ । केही यात्री अघि बढ्दै जाँदा समुद्रको कुनै भागमा रहेको टापुमा पुग्छन् । उनीहरु त्यहीँ आफ्नो जीवन रक्षा गर्छन् । उनीहरु दुर्घटनामा लागेको चोटको उपचार गर्दै नयाँ जिन्दगीको सपना बोकेर बढिरहेका छन् । केही यात्री चालकले दिएको धोका स्मरण गर्दै आफूलाई झन्झन् बर्बाद गरिरहेका छन् । केही यात्रीले सुरक्षित ठाउँ फेला पार्न सक्दैनन् । उनीहरू ठूलाठूला सामुद्रिक जीवहरुको ढाडमा जोखिमपूर्ण तरिकाले आफूलाई बचाइरहेका छन् । साथसाथै सुरक्षित ठाउँको खोजीमा छन् ।
एकजना कुशल चालकले समुद्रमा डुबेका यात्रीहरूलाई देख्छन् । उनीहरुको हालत देखेर उनमा प्रेमभाव जाग्छ । उद्दार गर्ने उदेश्यका साथ उनले यात्रीहरुलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्न खोज्छन् । केही यात्री उनीसँग जान तयार हुन्छन् र उनीहरूको जीवन धन्य हुन्छ । तर केही पीडित यात्री अघिल्लो चालकले दिएको धोका स्मरण गर्छन् । परम्शान्तिको यात्रामा हिँडेको तर झन्झन् भ्रान्ति मिलेको र आफू पहिलेको स्थितिभन्दा झन्झन् तल गिरेको तस्बिर उनीहरूको दिमागमा आउँछ । फेरि पनि आफू सुरक्षित ठाउँमा पुग्ने आसमा योभन्दा झन् बर्बाद होइने त हैन भन्ने शङ्का पैदा हुन्छ उनीहरुमा । बरm दुःख भए पनि यहीँ मर्छौं भन्दै सोच्नै नसक्ने पीडामा छट्पटिएर बसिरहन्छन् ।
चालकले जहाजबाट निकालिदिए पनि केही यात्री अझै उनीबाट केही प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यस जहाजको पछाडिको भागमा समातेर जोखिमपूर्ण र अनिश्चित यात्रा गरिरहेका छन् । कुनै यात्री जहाज निर्माणका क्रममा शरीरमा लागेको चोटले पलपल दुःख दिइरहेको बेलामा अझै ठूलो बज्रपात परेकोमा पीडित छन् ।
केही यात्री यो सबै दुर्घटना घट्नुको कारण आफ्नै जन्मजन्मको कर्मको कारण हो भन्छन् । यसमा धेरै दुःख, कष्ट त भयो नै तर पनि यसले आफ्नो जन्म जन्मको संस्कार काटेको ठान्छन् । दुर्घटना हुनु आफँैमा दुःखद् घटना हो र दुःखबाट भए पनि आफूले धेरै ज्ञान सिकेको महसुस गर्छन् ।
चालक दुःखबाट आफूलाई सम्हाल्दै यात्रीसहित मिलेर बनाएको जहाज उनीहरुको कल्याणमा लगाउने विचार गर्छन् । अपसोच चालकको सहयात्रीलाई यो कुरा मन पर्दैन । चालक सहयात्रीको कुरा सुनेर संसारको मुक्ति दिलाउने सपना देखाएर बनाएको जहाज व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गर्छन् । ती चालकले अहिले त्यो जहाजलाई अलिअलि मर्मत गरेर व्यक्तिगत व्यवसायमा प्रयोग गर्छन् । पहिलाकै सपना तर अलि फरक शैलीबाट फेरि अन्य व्यक्तिहरूलाई आनन्दको मार्गमा अगाडि बढाउँदैछन् । पहिला धोका खाएका यात्रीहरू भने उनको यस्तो चाला देखेर सोच्छन् कि फेरि त्यो जहाज कहाँ गएर ध्वस्त हुने हो ।
यस घटना नजिकबाट नियालिरहेका एक प्रत्यक्षदर्शीले यसरी आफ्नो दुःख व्यक्त गर्दै भन्छन् – “महान् सपना देखाएर तुच्छ मनको वशमा परेर यात्रीहरुसहित सबैको साझा भनिएको सम्पत्तिलाई व्यक्तिगत व्यवसायका रुपमा लगाउनु साह्रै निकृष्ट कार्य हो । पिचाशीय कार्य हो । यस्ता कार्य गर्नेहरु आफ्नो कार्य सच्याएर अगाडि नबढेसम्म गुफाकन्दरा जहाँ पुगे पनि भट्किरहन्छन् । महान् सपना बाँडेर अन्तिममा अनुसन्धानका लागि हो भनेर भाग्नु सोझासाझा व्यक्तिहरुको जिन्दगी बर्बाद गर्नु हो । यो अक्षम्य अपराध हो ।“
अहिले चालक पुरानो दुर्घटना बिर्सिन्छन् र पुराना घाइते यात्रीहरुलाई वास्ता नगरी नयाँ यात्रीहरुलाई महान् सपना बाँड्नमा मस्त छन् ।
“हाम्रो जिन्दगी बर्बाद गरेजसरी फेरि अरुको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त छैनन् यी चालक ?” एक पीडित यात्रीको मनमा बारम्बार यस्तो विचार आइरहन्छ ।
“चालकले स्वार्थवश जहाज कब्जा गरे पनि त्यसबाट अनवरत रुपमा यात्रीहरुको ध्वनि निस्किरहेको छ – “यो हामी सबैको हो ।”
चालक लोभमोहको बुझोले कानसमेत टालिएर यो कुरा सुनिरहेका छैनन् । सबैको साझा भनेर घोषणा गरेको जहाजसमेत व्यक्तिगत प्रयोजनमा लगाएको देखेर जहाज निर्माणको क्रममा यात्रीहरुको निस्किएको पसिना र रगत भित्तामा लतपतिएर बसेका भूतपूर्वक यात्रीहरु चालकको गतिविधि नियाल्दै भन्दै छन् – “हे चालक, बुद्धिविलासबाट संसारलाई झुक्याउन सजिलो होला । संसारको कानुन छल्दै पानीमाथि ओभानो बन्न धेरै सजिलो हुन्छ । तर ईश्वरको कानुन बोल्न सक्ने नसक्ने, देख्न सक्ने नसक्ने, सोच्न सक्ने नसक्ने सारा संसारका लागि बराबर हुन्छ । आफूले गरेका कार्यबाट भागेर आफू सुरक्षित भएको ठान्नु भ्रम हो । आफूले गरेको हरेक कर्मको फल अवश्य भोग्नुपर्छ । अझै पनि सचेत नभएर अरुको रगत र पसिनामाथि खेलबाड गरिन्छ भने प्रकृति स्वयम्ले कर्मको हिसाब गर्नेछ । धेरै दुःख पाएपछि अन्तिममा बोध हुनेछ – महान् सपना बाँडेर अरुलाई भ्रममा पार्नुभन्दा आफैँ यथार्थको खोजीमा लाग्नु ठूलो कुरा हो । आफूले पूरा नगरेको ज्ञान अरुलाई सिकाएर अरुको जिन्दगी बर्बाद गर्नुभन्दा आफू ज्ञानप्राप्तिको बाटोमा लाग्दा आफुलगायत धेरैको कल्याण हुन्छ । आफु अर्धनिद्रामा रहेर अरुलाई जगाउने सपना देख्नुभन्दा आफैँ जाग्ने बाटोमा लाग्दा धेरैको कल्याण सम्भव हुन्छ । जुन दिन आफू जागृत भइन्छ त्यस दिन पूरा हुनेछ ‘आफू जागे सिङ्गो संसार जाग्छ’ भन्ने नारा ।“
यो कथा सबै पीडितहरूको आवाज हो ।
कालापानी लिपुलेक हाम्रो हो भन्दै महाकाली मेची साइकल यात्रा
कालापानी लिपुलेक हाम्रो हो भन्दै तीन युवाले गरेको महाकाली मेची साइकल यात्रा टोलीलाई आज भरतपुरमा...
पहिलो पटक पशुपतीदेखि फोकसुण्डोसम्म बुलेट मोटरबाईक यात्रा
बीएल–मनघरी फाउण्डेशन र नासा बुलेट क्लवको संयुक्त...
१. उपत्यकामा चालक अनुमतिपत्र वितरणमा रोक
२. बितेको २४ घण्टामा काठमाडौँ छिर्नेमध्ये ४० जनामा कोरोना संक्रमण
३. काठमाडौँ उपत्यकामा थप ६२ जनामा कोरोना संक्रमण
४. थप २५९ जना संक्रमित भेटिए, कुल संक्रमितको संख्या २१ हजार ९ पुग्यो
५. थप ६५ जना कोरोना संक्रमित घर फर्किए, निको हुनेको संख्या १५ हजार २६ पुग्यो
६. केन्द्रीय कमिटि बैठक नबोलाउने मुडमा प्रधानमन्त्री ओली
७. खोकना विवादले फास्ट ट्रयाक निर्माणमा समस्या : प्रधान सेनापति थापा
८. भारतमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितको संङ्ख्या १८ लाख ५५ हजार नाघ्यो
९. कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी दोब्बर